ပြင်ဆင်မှု 3D v4 များအတွက်ယာဉ်ကျားကန်?
မေးခွန်း ပြင်ဆင်မှု 3D v4 များအတွက်ယာဉ်ကျားကန်?
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1334 by richb
မင်္ဂလာပါခဲ့ကြ P3D v4 အလုပ်လုပ်မည်ကိုဒေါက်ဂလပ် propliners ရှာဖွေနေခဲ့ကြလပေါင်းများစွာ v4 နှင့်။ ငါ c47 / DC3 ရှိသည်။ အလုပ်လုပ်နိုင် DC4 / 6or 7s နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကံကောင်းပါစေရှိသည်။ v6 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အချို့, DC-4Bs ရှိသည်ဖို့ကိုချစ်မလား!
0.145 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်